ရုပ်သံအကူဒိုင်စနစ် (VAR) ကို အသုံးပြုတာက တကယ်အကျိုးရှိစေရဲ့လား
27 Jun 2018 . 5:15 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ရုပ်သံအကူဒိုင်စနစ် (VAR)ကို ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအသုံးပြုမယ်လို့ ဖီဖာက ကြေညာခဲ့ချိန်မှာ ထောက်ခံတဲ့အသံတွေထက် ဝေဖန်သံတွေက ပိုပြီးထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက ဖီဖာဟာ VAR စနစ်ကို သူ့လက်အောက်ခံပြိုင်ပွဲတွေမှာ စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့တုန်းကလည်း အဲဒီစနစ်အပေါ် ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဝေဖန်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဖီဖာကတော့ ခေါင်းမာမာနဲ့ပဲ VAR စနစ်ကို အတည်ပြုခဲ့တယ်။ ဒီစနစ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ ဘောလုံးပွဲတွေမှာ အငြင်းပွားစရာသွင်းဂိုးတွေ၊ ပယ်နယ်တီတွေ၊ လူကျွံဘောတွေ၊ လူမှားပြီး ထုတ်ပယ်တာမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ရုပ်သံနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်စေတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီစနစ်အသုံးပြုတာက တကယ်ရောအကျိုးရှိစေရဲ့လား။ အဓိကပြောချင်တာက ပယ်နယ်တီဂိုးတွေပါပဲ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပယ်နယ်တီပေးခဲ့ရတဲ့အကြိမ်က ဒီနေ့ညပွဲတွေ မတိုင်ခင် (၂၂)ကြိမ်အထိရှိနေပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ပယ်နယ်တီပေးခဲ့ရမှုအများဆုံးပြိုင်ပွဲတွေက ၁၉၉၀၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၂ ပြိုင်ပွဲတွေမှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း(၁၈)ကြိမ်အထိရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီစံချိန်ကို ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲက ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို ကစားရမယ့်ပွဲတွေကလည်း အများကြီးကျန်သေးတာကြောင့် နောက်ထပ်၊ နောက်ထပ်သော ပယ်နယ်တီဂိုးတွေကို ထပ်ပြီး မြင်ရဦးမှာပဲ။ ဒီပယ်နယ်တီ(၂၂)ကြိမ်မှာ ပယ်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်လို့ ပေးခဲ့ရတာထက် လက်ထိဘောတွေကြောင့် ပေးခဲ့ရတာ ပိုများတာကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိမှာပါ။ ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲမှာ လက်ထိဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လက်နဲ့ပုတ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို၊ မတော်တဆလက်နဲ့ထိမိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကို ရုပ်သံပြန်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာက ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့တာဝန်ပါ။ အခု လက်ထိဘောဖြစ်ရပ်တော်တော်များများကို ကြည့်ရင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လက်နဲ့ထိတာထက်၊ မတော်တဆလက်နဲ့ ထိမိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ ပိုများပါတယ်။
အာဂျင်တီးနား-နိုက်ဂျီးရီးယားတို့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းက အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူ ရိုဟို Rojo ခေါင်းခုန်တိုက်ရင်း ဘောလုံးကို လက်နဲ့ထိမိခဲ့တယ်။ ဒါကို တူရကီလူမျိုးကွင်းလယ်ဒိုင် ဂျက်ကစ် Çakir က ရုပ်သံပြန်ကြည့်ပြီး ပယ်နယ်တီ မပေးခဲ့ဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောရမယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေဖြစ်နေတာက ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ထက် VAR ကို အားကိုးနေတာက ဆိုးရွားလွန်းတယ်။ အီရန်-ပေါ်တူဂီပွဲတုန်းက မလိုအပ်ဘဲ VAR ခဏခဏ ပြန်ကြည့်နေတာကြောင့် ပွဲရဲ့အရှိန်ကို နှောက်နှေးစေပြီး အချိန်လည်းပုတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဂိုးသွင်းပြီးရင် VAR နဲ့ ပြန်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တာပါ။ တချို့ဂိုးတွေကတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ လူကျွံအနေအထား၊ လက်နဲ့ထိ မထိ စတဲ့ သံသယဖြစ်စရာအနေအထားဆိုရင်တော့ မှန်ပါတယ်။ အခုက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနေအထားမှာတောင် VAR ကို ကြည့်ပြီးမှ ကွင်းလယ်ဒိုင်က ဂိုးပေးတာက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲဆိုရမယ်။
စပိန်-မော်ရိုကိုပွဲမှာ စပိန်တိုက်စစ်မှူး အက်စ်ပတ် Aspas ရဲ့သွင်းဂိုးကိုပဲကြည့်ပါ။ အက်စ်ပတ်ဟာ လူကျွံထောင်ချောက်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်က VAR နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဂိုးပေးခဲ့တယ်။
စနစ်တစ်ခုမှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိနိုင်သလို ဆိုးတဲ့အချက်တွေရှိတာကလည်း ရှိတာက ဓမ္မတာပါပဲ။ အခု VAR လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Technology တွေ အားကိုးလွန်းတာကြောင့် လူသားတွေရဲ့ Efficiency ကျဆင်းလာတာကတော့ စိတ်ပျက်စရာပါ။ အခုလည်း ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးတွေက ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ဖို့ တွေဝေနေတာ၊ ရုပ်သံပြန်ကြည့်ပြီးတာတောင်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားယွင်းနေတာ စတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို မြင်တွေ့နေရတယ်။VAR စနစ်ကို အသုံးပြုတာဟာ တကယ်ရော အကျိုးရှိစေရဲ့လားဆိုတာ ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ် . . .
Photo: The Australian,Evening Standard,Washington Post,YouTube
ရုပျသံအကူဒိုငျစနဈ (VAR) ကို အသုံးပွုတာက တကယျအကြိုးရှိစရေဲ့လား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ရုပျသံအကူဒိုငျစနဈ (VAR)ကို ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအသုံးပွုမယျလို့ ဖီဖာက ကွညောခဲ့ခြိနျမှာ ထောကျခံတဲ့အသံတှထေကျ ဝဖေနျသံတှကေ ပိုပွီးထှကျပျေါခဲ့တယျ။ ဒီကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမတိုငျခငျကတညျးက ဖီဖာဟာ VAR စနဈကို သူ့လကျအောကျခံပွိုငျပှဲတှမှော စမျးသပျအသုံးပွုခဲ့တုနျးကလညျး အဲဒီစနဈအပျေါ ဘောလုံးလောကရဲ့ နာမညျကွီးပုဂ်ဂိုလျတှကေ ဝဖေနျခဲ့ကွဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ သိတဲ့အတိုငျးပဲ။ ဖီဖာကတော့ ခေါငျးမာမာနဲ့ပဲ VAR စနဈကို အတညျပွုခဲ့တယျ။ ဒီစနဈရဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ ကောငျးတယျလို့ပဲပွောရမယျ။ ဘောလုံးပှဲတှမှော အငွငျးပှားစရာသှငျးဂိုးတှေ၊ ပယျနယျတီတှေ၊ လူကြှံဘောတှေ၊ လူမှားပွီး ထုတျပယျတာမြိုးတှေ မဖွဈရအောငျ ရုပျသံနဲ့ပွနျကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျစတောပါ။
ဒါပမေဲ့ ဒီစနဈအသုံးပွုတာက တကယျရောအကြိုးရှိစရေဲ့လား။ အဓိကပွောခငျြတာက ပယျနယျတီဂိုးတှပေါပဲ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပယျနယျတီပေးခဲ့ရတဲ့အကွိမျက ဒီနညေ့ပှဲတှေ မတိုငျခငျ (၂၂)ကွိမျအထိရှိနပေါပွီ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ပယျနယျတီပေးခဲ့ရမှုအမြားဆုံးပွိုငျပှဲတှကေ ၁၉၉၀၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၂ ပွိုငျပှဲတှမှောဖွဈပွီး စုစုပေါငျး(၁၈)ကွိမျအထိရှိခဲ့တယျ။ အဲဒီစံခြိနျကို ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲက ခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့ပွီဖွဈသလို ကစားရမယျ့ပှဲတှကေလညျး အမြားကွီးကနျြသေးတာကွောငျ့ နောကျထပျ၊ နောကျထပျသော ပယျနယျတီဂိုးတှကေို ထပျပွီး မွငျရဦးမှာပဲ။ ဒီပယျနယျတီ(၂၂)ကွိမျမှာ ပယျနယျတီဧရိယာအတှငျး ပွဈဒဏျကြူးလှနျလို့ ပေးခဲ့ရတာထကျ လကျထိဘောတှကွေောငျ့ ပေးခဲ့ရတာ ပိုမြားတာကို ပရိသတျတှေ သတိပွုမိမှာပါ။ ပယျနယျတီဧရိယာထဲမှာ လကျထိဘောဖွဈတယျဆိုတာ အခွအေနအေမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ လကျနဲ့ပုတျတာ ဖွဈနိုငျသလို၊ မတျောတဆလကျနဲ့ထိမိတာလညျးဖွဈနိုငျတယျ။ အဲဒါကို ရုပျသံပွနျကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျရမှာက ကှငျးလယျဒိုငျရဲ့တာဝနျပါ။ အခု လကျထိဘောဖွဈရပျတျောတျောမြားမြားကို ကွညျ့ရငျ ရညျရှယျခကျြရှိရှိ လကျနဲ့ထိတာထကျ၊ မတျောတဆလကျနဲ့ ထိမိတဲ့ဖွဈရပျတှေ ပိုမြားပါတယျ။
အာဂငျြတီးနား-နိုကျဂြီးရီးယားတို့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲတုနျးက အာဂငျြတီးနားနောကျခံလူ ရိုဟို Rojo ခေါငျးခုနျတိုကျရငျး ဘောလုံးကို လကျနဲ့ထိမိခဲ့တယျ။ ဒါကို တူရကီလူမြိုးကှငျးလယျဒိုငျ ဂကျြကဈ Çakir က ရုပျသံပွနျကွညျ့ပွီး ပယျနယျတီ မပေးခဲ့ဘူး။ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြလို့ပွောရမယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဒိုငျလူကွီးတှဖွေဈနတောက ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြထကျ VAR ကို အားကိုးနတောက ဆိုးရှားလှနျးတယျ။ အီရနျ-ပျေါတူဂီပှဲတုနျးက မလိုအပျဘဲ VAR ခဏခဏ ပွနျကွညျ့နတောကွောငျ့ ပှဲရဲ့အရှိနျကို နှောကျနှေးစပွေီး အခြိနျလညျးပုတျပါတယျ။ နောကျတဈခကျြက ဂိုးသှငျးပွီးရငျ VAR နဲ့ ပွနျကွညျ့ပွီးမှ ဆုံးဖွတျတာပါ။ တခြို့ဂိုးတှကေတော့ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ လူကြှံအနအေထား၊ လကျနဲ့ထိ မထိ စတဲ့ သံသယဖွဈစရာအနအေထားဆိုရငျတော့ မှနျပါတယျ။ အခုက ရှငျးရှငျးလငျးလငျးအနအေထားမှာတောငျ VAR ကို ကွညျ့ပွီးမှ ကှငျးလယျဒိုငျက ဂိုးပေးတာက မဖွဈသငျ့ဘူးလို့ပဲဆိုရမယျ။
စပိနျ-မျောရိုကိုပှဲမှာ စပိနျတိုကျစဈမှူး အကျဈပတျ Aspas ရဲ့သှငျးဂိုးကိုပဲကွညျ့ပါ။ အကျဈပတျဟာ လူကြှံထောငျခြောကျကို ကြျောဖွတျပွီး ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ကှငျးလယျဒိုငျက VAR နဲ့ ဆုံးဖွတျပွီးမှ ဂိုးပေးခဲ့တယျ။
စနဈတဈခုမှာ ကောငျးတဲ့အခကျြတှလေညျး ရှိနိုငျသလို ဆိုးတဲ့အခကျြတှရှေိတာကလညျး ရှိတာက ဓမ်မတာပါပဲ။ အခု VAR လညျး ဒီအတိုငျးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ Technology တှေ အားကိုးလှနျးတာကွောငျ့ လူသားတှရေဲ့ Efficiency ကဆြငျးလာတာကတော့ စိတျပကျြစရာပါ။ အခုလညျး ကှငျးလယျဒိုငျလူကွီးတှကေ ကိုယျပိုငျဆုံးဖွတျခကျြ ခမြှတျဖို့ တှဝေနေတော၊ ရုပျသံပွနျကွညျ့ပွီးတာတောငျမှ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ မှားယှငျးနတော စတဲ့ဖွဈရပျတှကေို မွငျတှနေ့ရေတယျ။VAR စနဈကို အသုံးပွုတာဟာ တကယျရော အကြိုးရှိစရေဲ့လားဆိုတာ ပရိသတျတှကေိုယျတိုငျပဲ စဉျးစားဆုံးဖွတျစခေငျြပါတယျ . . .